Added by ukkmaung on December 31, 2011 at 9:27pm — No Comments
အဖေဆိုတာ...So true. 父親就是真實
အခုတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာနဲ့ တကွဓါတ်ပုံလေးများနဲ့ ပါတွဲပြီးတွေ့ လို့ ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်..…
Added by ukkmaung on December 30, 2011 at 7:30am — No Comments
မကြာခင် တွင် ပညတ်အားဖြင့် နှစ်သစ်မည်သော…
Added by ukkmaung on December 29, 2011 at 12:00pm — No Comments
လောကမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံးမေတ္တာ 母親的品質影響著孩子的未來
Added by ukkmaung on December 28, 2011 at 5:23pm — No Comments
တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ ရန်ကုန်မြို့ထဲကနေ အင်းစိန်ကို တက္ကစီကားလေး တစ်စီးငှားပြီး ပြန်လာခဲ့ ပါတယ်။ တက္ကစီကားသမားက စိတ်မရှည်တဲ့အတွက်…
Added by ukkmaung on December 27, 2011 at 10:35pm — No Comments
နှုတ် +ဆက် = မင်္ဂလာ
မကြာတော့မည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ နှစ်သစ်ကူးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်…
Added by ukkmaung on December 26, 2011 at 8:30pm — No Comments
Added by ukkmaung on December 25, 2011 at 3:54pm — No Comments
မြန်မာလူမျိုးများဟာ အင်မတန်အလှူအတန်း ရက်ရောတဲ့ လူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအ၀င် မြန်မာလူ့ဘောင်တစ်ခုလုံးမှာ အလှူဒါနနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံ စကားပုံဆိုရိုးစကားတွေဟာ ပြောမဆုံးနိုင်အောင်…
Added by ukkmaung on December 24, 2011 at 4:30pm — No Comments
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိရရှိခဲ့သော အလင်းနိမိတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပြန့်နှံ့စေလျှက် ထွက်လေ၊ ၀င်လေကို ဖြစ်စေ၍ အားထုတ်ရခြင်းသည် တတိယအဆင့် အာနာပါနအားထုတ်နည်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးရှင်လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်း…
Added by ukkmaung on December 23, 2011 at 4:30pm — No Comments
ဒီဘ၀ ဒီခန္ဓာ နဲ့ သံသရာ ၀ဋ်ဇတ် အမြစ်ပြတ် အောင် အားမထုတ်နိုင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ သေလွန်ပြီးတဲ့ နောက် ကောင်းရာ သုကတိ ရောက်ဖို့ ကိစ္စ ကို အရေး တကြီး ထည့်သွင်း…
Added by ukkmaung on December 22, 2011 at 5:55pm — No Comments
ပညာရှိကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း မင်္ဂလာ…
Added by ukkmaung on December 21, 2011 at 4:29pm — No Comments
သူတော်ကောင်း အစားစားတွေထဲမှာ အချိုံ့သော သူတော်ကောင်းတွေကို စာရေးသူ ကြည်ညိုရုံသာကြည်ညိုပြီး မချစ်ခင်ပါဘူး။ အချို့သော…
Added by ukkmaung on December 20, 2011 at 10:01pm — No Comments
Added by ukkmaung on December 19, 2011 at 8:55pm — No Comments
အခုနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာကိုပဲ ဘယ်လိုကဘယ်လို ကာလပေါ် “အတွေးအချော်ရှင်” (အတွေးအခေါ်မဟုတ်)သစ်တွေ ပေါ်လာသလဲတော့ မသိဘူး၊ မေးခွန်းဆန်းတွေနဲ့ ခဏခဏကြုံရတယ်။ တလောဆီကပဲ လူလတ်ပိုင်း ခေတ်ပညာတတ်ဆိုသူ တစ်ဦးက အခုလက်ရှိ…
Added by ukkmaung on December 18, 2011 at 4:05pm — No Comments
သီဟိုဠ်ကျွန်းသို့ စတင်ရောက်သောနှစ်တွင် ကံကောင်းစွာဖြင့် လေးနှစ်မှတစ်ကြိမ်သာ စွယ်တော်လှည့်လည်…
Added by ukkmaung on December 17, 2011 at 10:38am — No Comments
ဟန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လောကကြီး
Added by ukkmaung on December 16, 2011 at 9:04pm — No Comments
တချို့က လောကကြီးကို “အကောင်း”လို့ မြင်တတ်ကြပြီး တချို့က လောကကြီးကို “အဆိုး” လို့ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လောကကြီး ကို လွှမ်းမိုးအုပ်စိုး နေတာဟာ အကောင်း နဲ့ အဆိုး မဟုတ်ဘဲ…
Added by ukkmaung on December 15, 2011 at 9:07pm — No Comments
Added by ukkmaung on December 14, 2011 at 5:39pm — No Comments
မိမိ တရားထိုင်သည်ကို သိကြတဲ့ မိတ်ဆွေများဟာ မိမိကို တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် မည်သို့ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရပါလဲ ဟု မေးခဲ့ကြသည်။…
Added by ukkmaung on December 13, 2011 at 5:30pm — No Comments
ဟု တီးတိုးရေရွတ်လိုက်မိသည်၊ တစ်ပင်လုံးဝါနေသော အဲ…. နီနေသော မေပယ်လ်ပင်လေး၊ သတိထားမိသည်မှာ မနှစ်ကလည်း…
Added by ukkmaung on December 12, 2011 at 4:30pm — No Comments